तपाईंसँग ड्रोनमार्फत गर्ने कामको कुनै आडिया छ ? डलर जित्न तयार हुनुस्
अर्थ संसार काठमाडौँ – के तपाई नेपालमा बसेर ड्रोनमार्फत सेवा दिन चाहानुहुन्छ ? के तपाईसँग ड्रोन बिजनेससँग सम्बन्धित नयाँ आइडिया छ ? हुइ रोबटिक नामक संस्थाले नेपाल फ्लाइङ ल्याब, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन र रोबटिक एसोसिएसन अफ नेपालको सहकार्यमा ‘सेवाका रुपमा ड्रोन’ नामक प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने भएको छ ...
ट्वीटरमा फलोअर्स कसरी बढाउने ?
अर्थ संसार के तपाई ट्वीटर चलाउनुहुन्छ । ट्वीटरमा थोरै फलोअर्स भएर चलाउन दिक्क लागिरहेको छ । ट्वीटरमा धेरै फलोअर्स बढाउन चाहानुहुन्छ ? यस्ता छन् ट्वीटरमा फलोअर्स बढाउने उपाय । ...
के – के छन् फेसबुकका फाइदा तथा बेफाइदा ?
अर्थसंसार काठमाडौँ – सामाजिक संजालहरु मध्ये फेसबुक निकै लोकप्रिय छ । दैनिक ५ सय मिलियनभन्दा बढीले फेसबुक चलाउने गर्छन् । के तपाईंलाई फेसबुकको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा जानकारी छ ? यस्ता छन् फेसबुकका फाइदा तथा बेफाइदा । ...
तपाईंले चलाउने मोवाइलले दिने सुविधा सबै उपयोग गर्नु भएको छ ? के छन् फाइदा र बेफाइदा ?
अर्थसंसार काठमाडौँ – आजकल सबैको हात हातमा मोबाइल फोन देखिन्छ । सबैले विभिन्न प्रयोजनका लागि मोबाइल फोनको प्रयोग गर्छन् । जन्मिएर १ वर्ष पुगेको बच्चासमेत मोबाइल फोन हातमा पाउँदा खुशी हुन्छ । सबैको हातमा हुने मोबाइल फोनका फाइदा तथा बेफाइदा दुवै छन् । ...
५ वर्षभित्र लाइसेन्सलाई स्मार्ट कार्डमा बदल्न कठिन
जीवन बस्नेत, काठमाडौं-सरकारको ३ देखि ५ वर्षभित्र देशभर रहेका सबै कागजी सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई विद्युतीय स्मार्ट कार्ड ९लाइसेन्स०मा बदल्ने योजना पूरा नहुने देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबै कागजी लाइसेन्सलाई स्मार्ट कार्डमा लैजाने घोषणा गरेको अवधिको १४ महिनामा कुल १ लाख ३९ हजार स्मार्ट कार्ड वितरण गरेको छ । ...
कसरी फेर्ने ह्वाटसएपमा नोटिफिकेशन रिंगटोन ?
अर्थसंसार काठमाडौँ – के तपाई ह्वाटसएप चलाउनुहुन्छ ? एपको सहायताले फोनकललगायत म्यासेज पठाउने गर्नुहुन्छ ? यसमा नोटिफिकेशन रिंगटोन कसरी फेर्ने भनेर अल्मलिनु भएको छ ? यसको रिंगटोन फेर्ने सजिलो उपाय छ । ...
कसरी राख्ने आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल सुरक्षित ?
अर्थसंसर काठमाडौँ – के तपाईंले आफ्नो फेसबुकको प्रोफाइल सुरक्षित राख्नुभएको छ ? आफूले फेसबुकमा राखेको फोटो, पोष्ट वा गोप्य कुराकानी बचाएर राख्न चाहनुहुन्छ ? आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल सुरक्षित राख्न तपाईंले यी उपायहरु अपनाउन सक्नुहुन्छ । ...
कसरी जान्ने ७ दिनमा अरुको देशको भाषा ? यस्ता छन् उपाय
अर्थसंसार काठमाडौँ– के तपाई विदेश जाने योजनामा हुनुहुन्छ ? देशमै बसेर विदेशीको गाइड बन्न चाहानुहुन्छ ? अरुको भाषा सिकेर दक्ष्य बन्न चाहनुहुन्छ ? ...
रोमान्टिक होली फोटो शूट
पाँचौ भक्तपुर औधोगिक सांस्कृतिक,पर्यटन तथा व्यापार मेला २०७५/७६ हुँदै
ईयू नेपालसँग बढ्दो संवाद तथा साझेदारीताको अपेक्षा गर्दछ
लोक गायिका लक्ष्मी तामाङ सांगीतिक क्षेत्रमा चर्चा बटुल्दै (फोटोफिचर)
१ विप्लवविरुद्ध सेना परिचालन सम्बन्धमा नेपाल सेनाले निकल्यो यस्तो विज्ञप्ति
२ धितोपत्र बोर्डले निकाल्यो प्यान नम्वर अनिवार्य सम्बन्धमा यस्तो विज्ञप्ती
३ ग्लोबल आईएमई बैंक र नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सबीच सम्झौता
४ शेयर बजारको घट्ने क्रम रोकिएन
५ रुपन्देहीमा दुई ठूला आयोजना, प्रधानमन्त्रीबाट भोलि उद्घाटन